Nhau - Nhau dzakanaka! Yekambani nhamba 3 waya bonder yakaiswa mukubudirira zvinobudirira!
Musi waApril 30, 2018, mushure memwedzi yakati wandei yekugadzirisa dambudziko, kambani ichangotengwa Nha.
Iyo midziyo inogona kushandiswa kwepamusoro-soro muchinjikwa weyakaipisa-yakakungururwa ribbed simbi bar, inotonhora-yakakunguruswa ribbed simbi bar uye yakatenderera yakatenderera inotonhora-yakakweva simbi bar, ine hombe kuburitsa, yakakwira kunyatsoita, inokodzera nadzurudzo, yakaderera kutadza chiyero, simba simba -kuchengetedza uye mhando yepamusoro. Iyo midziyo inodzorwa nePCC inogadziriswa komputa. Iyo upamhi uye nzvimbo dzesimbi mesh dzinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa. Iyo mesh ine grid dzakasiyana nzvimbo inogona kusunganidzwa otomatiki. Iine inobata mhando yekudzora skrini, mamiriro ekushanda emidziyo anogona kuongororwa munguva chaiyo kuburikidza nechiratidziro kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinokodzera.
Kubva kutanga kwegore rino, mirairo kubva kuvakuru vatengi yauya imwe mushure meimwe. Iyo kugadzirwa kweNo. 3 waya mechine ichawedzera kwazvo kugona kwekambani, kupa rutsigiro rwakasimba kusangana nezvinodiwa nevatengi uye kugadzirisa mwero wenguva yekuendesa kurongeka, uye kubatsira kukurumidza kukurumidza kwemabhizinesi.
Iyo kambani yakawedzera maviri akazara akazara ekugadzira mitsara mumakore maviri apfuura, uye kuburitsa kwesimbi yakasungwa mesh mesh kwakawedzera zvakanyanya. Iyo kambani yakawana yeAustralia ACRS chitupa kwemakore mana. Huwandu hweodhodhi yekumba neyekunze iri kuwedzerawo gore gore. Zvekusimudzira mune ramangwana, kambani yedu iri kurongera kuwedzera zvimwe zvekushandisa mune ramangwana kuzadzisa zvido zvevatengi kumba nekune dzimwe nyika.